Queer 'Hypochondriac' သည် စိတ်ရောဂါ၏ မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုကို အာရုံစိုက်သည်
ဇြန္လ 7, 2022
လူတိုင်းဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်း နာကျင်မှုကို ခံစားရပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်၊ Googling စတင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက် သေဆုံးတော့မယ်လို့ ယုံကြည်လာကြပါတယ်။ “အစ်ကို.. ဘယ်တော့မှ Google” လို့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က သတိပေးတယ်။ Hypochondriac.
သို့သော် လက်တွေ့နှင့် မှိုင်းတိုက်မှုကြားက မျဉ်းကြောင်းက ပိုပို၍ မှုန်ဝါးလာကာ ထိုကြောက်ရွံ့မှုများက အမှန်ဖြစ်နိုင်လျှင်ကော။ အဲဒါက ဗဟိုတင်းမာမှုပဲ။ Hypochondriacဒါရိုက်တာရဲ့ ပွဲဦးထွက် Addison Heimann ဒီနှစ်မှာ ဖမ်းမိတာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ကြည့်ရှုပါ။
Hypochondriac ကြည့်နေရင်းနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပေမယ့် အချိန်အကြာကြီး စိတ်မသက်မသာအတွေးတစ်ခုလို စွဲမြဲနေပါလိမ့်မယ်။ ကွဲပြားသောထင်မြင်ချက်များစွာကို ယူဆောင်လာရန် သေချာပါသည်၊ ၎င်းတွင် လက်တွေ့ကျသောအကြောင်းအရာအကြောင်းအရာနှင့်အတူ၊ ၎င်းသည် အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီး အချို့သောလူများအတွက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အလွန်အကျွံဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်း သတိပြုသင့်သည်။
ဒါပေမယ့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ယထာဘူတတရားကို ကိုင်တွယ်တတ်သူတွေအတွက်တော့၊ Hypochondriac ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အဆက်များနှင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ခွေ့များဖြင့် ကြောက်စရာကောင်းသော စီးနင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဂေးအိုးထိန်းသမား (Zach Villa) သည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက စိတ်ထိခိုက်စရာ အဖြစ်အပျက်များကို စတင်သတိရပြီး ကမောက်ကမဖြစ်မှုအောက်သို့ ကျဆင်းသွားစေသည်။
Hypochondriac ရုပ်ရှင်တွေလို မှတ်မိနေတယ်။ Donnie darko (အချို့သောနည်းလမ်းများတွင် အနည်းငယ်များလွန်းသည်) နှင့် ပို၍မကြာသေးပါ။ မြင်းမိန်းကလေး.
ဤတွင် စိတ်ရောဂါ၏ သရုပ်ဖော်ပုံသည် လိုလားသူ နှင့် သမားရိုးကျ နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်သည့် အတွက် စိတ်မသက်မသာ အစစ်အမှန် ဖြစ်သည်။ အဓိကဇာတ်ကောင် တွေ့ကြုံနေရသော ပြဿနာများအတွက် ဤအဆင့်သည် ကျွန်ုပ်တွေ့ဖူးသမျှ အမှန်ကန်ဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ပင် ကျွန်ုပ်ကို စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေကာ အထူးသဖြင့် ရုပ်ရှင်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အဖြစ်အပျက်များနှင့် အလွန်ဆင်တူသည့် မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ရှိနေပါသည်။ ဒီဇာတ်ကားက သူကိုင်တွယ်တဲ့အကြောင်းအရာအတွက် နှာတံနည်းနည်းလေးနဲ့ အဆုံးသတ်သွားပေမယ့် အဲဒါက နှောင့်ယှက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုအရ၊ အဓိကဇာတ်ကောင် Devon Graye နဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့ Devon Graye က သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ အဓိက ဆက်ဆံရေးဟာ ဒီဇာတ်လမ်းကို ပြောပြဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ တချို့က ပြောနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ အလွန်သဘောမတူပါဘူး။ LGBTQ+ အသိုင်းအဝိုင်းရှိ မည်သူမဆို ဖြောင့်တန်းသောနယ်ပယ်မှ ထွက်လာခြင်း၏ ဖိအားသည် ပြင်းထန်နိုင်ကြောင်း သိပါသည်။ တကယ်တော့ queer အသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေထက် ပိုပါတယ်။ နှစ်ဆဖြစ်နိုင်ခြေ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။
မကြာခဏအဖြစ် Hypochondriac ဤပြဿနာများသည် လူငယ်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထုပ်ပိုးရန် မကြာခဏ ချန်ထားခဲ့ရသည့် မပြုပြင်ရသေးသော ကလေးဘဝ စိတ်ဒဏ်ရာမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
ဒါရိုက်တာသည် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အလွန်ချို့တဲ့နေသည့် အမျိုးအစားထဲတွင် queer ဇာတ်ကောင်များကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တင်းကျပ်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုရှိတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်မှာ သူ လုံးဝအောင်မြင်ခဲ့တယ် (ကျွန်တော်ဆိုလိုရင်းက စိတ်ရောဂါရှိတဲ့ လိင်တူချစ်သူ ရွှံ့စေးအနုပညာရှင်ကို ဘယ်သူက မသိတာလဲ။)
ဇာတ်လမ်းအပြင် ထုတ်လုပ်ရေးကလည်း အရမ်းကောင်းတယ်။ ကင်မရာအလုပ်သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ဦးတည်ချက်ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဓိကဇာတ်ကောင်၏ စိတ်အခြေအနေကို ပြသသည့် အေးမြသော၊ ဖန်တီးမှုနှင့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော ဇာတ်လမ်းများထဲတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ပါဝင်ပါသည်။
မင်းသားတစ်ဦးအနေဖြင့် Villa သည် ၎င်း၏ ရုန်းကန်မှုများကို ရှုတ်ချခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းမပြဘဲ ရုန်းကန်မှုများကို လုံးလုံးလျားလျား စာနာနားလည်မှုဖြင့် အပြည့်အ၀ ပုံဖော်ထားသည်။
ကင်မရာလက်ရာကောင်းရုံသာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ရိုးသားစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အချိန်ကောင်းဖြစ်သော်လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင် သူ၏ခရီးသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ လုံးဝပြောင်းသွားခြင်းနှင့်အတူ ရယ်မောဖွယ်ရာ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာ အစီအစဥ်တစ်ခုပင် ရှိသေးသည်။
အသံဒီဇိုင်းနှင့် တည်းဖြတ်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သည်၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် စာသားစကားပြောဆိုမှုများကို ဆက်သွယ်ရန် ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါ။
ဤရုပ်ရှင်တစ်လျှောက်လုံးတွင် အမှန်တကယ် ကြောက်စရာကောင်းပြီး စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသော အပိုင်းများစွာရှိသည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်များအကြောင်း မည်သို့ခံစားရသည်ဖြစ်စေ မည်သူမဆို "ပျော်ရွင်ဖွယ်" နာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်သည် အနည်းငယ်နှေးကွေးနေချိန်တွင်၊ ၎င်းသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ တက်လာပြီး ပြီးဆုံးခါနီးတွင် အကြမ်းဖက်မှုအချို့ကို ထိန်းထားခြင်းမရှိပေ။
Hypochondriac စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏ အထီးကျန်မှုနှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့် အဖြေ သို့မဟုတ် ဂရုမစိုက်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရနိုင်သော စိတ်ပျက်စရာများကို ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည်။
Hypochondriac စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ပရိသတ်တွေကို လက်မလွတ်စေချင်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၂၉ ရက်မှာ ရုံတင်ပြသနေပြီး XYZ Films က VOD မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာမို့ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
မျက်လုံး ၅ လုံးမှာ ၃ လုံး
Related ခေါင်းစဉ်များ:gay horrorအချစ်LGBTQ ထိတ်လန့်စိတ်ကျန်းမာရေးoverlook 2022overlook film festivaloverlook film festival 2022မာနထောင်လွှားသည့်လစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်အံ့သြစရာ
Next ကို up ကို
Tightwad အကြမ်းဖက်အင်္ဂါနေ့ - ၂-၂-၂၁ အတွက်အခမဲ့ရုပ်ရှင်
'Predator' Franchise မှ 'Prey' သည် တရားဝင် Trailer ရရှိသည်။
'မျိုချလိုက်သည်' ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်- ပိုးကောင်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ထိတ်လန့်စရာ
ထိတ်လန့်ဂုဏ်ယူစရာလ- Shudder's Queer ထိတ်လန့်စရာစုစည်းမှုတွင် အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံး
အင်တာဗျူး- 'The Last Thing Mary Saw' ဘာသာတရား၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်းမှ ဒါရိုက်တာ
'The Last Thing Mary Saw' ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်- A Poisonous Queer Period Piece
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းမာရ်နတ် - Up and the Filmmaker Megan Frazier
ထိတ်လန့်ခြင်းမာန်လ - ထိတ်လန့်စရာစာရေးဆရာ Eric LaRocca
သီးသန့်အပိုင်း- သေမင်းသတ္ထုထည့်သွင်းထားသည့် 'ငရဲမှကြိုဆိုပါတယ်'
ဇူလိုင်လ 5, 2022
အကောင်းဆုံး ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်အချို့သည် အခြားနိုင်ငံများမှ လာပါသည်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ရင်​ဆိုင်​ရပါလိမ့်​မယ်​ ငရဲပြည်မှကြိုဆိုပါတယ် ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်တွဲကို စိတ်ဝင်စားမိပါသည်။ သင်သည် ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော သေမင်းသတ္ထု၏ ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်ပါလာသော ဘာသာရေးဆန့်ကျင်ရေး စီရင်ချက်အားလုံးကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါက၊ ၎င်းတို့ကို ဤသီးသန့်ကလစ်ဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုပါ။
ငရဲပြည်မှကြိုဆိုပါတယ် (Bienvenidos al Infierno)၊aနင် မူရင်းဇာတ်လမ်းသည် သူမ၏လူသတ်သမားဖြစ်သူကို လွတ်မြောက်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေသော ကြောက်မက်ဖွယ်မိခင်တစ်ဦးကို ပုံဖော်ထားသည်။ ဒါရိုက်တာ Jimena Monteoliva (အာဂျင်တီးနားထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်၊ကလီမတီနာ) တွင် ပြသခဲ့သည်။ Sitges ရုပ်ရှင်ပွဲတော် စပိန်မှာ မစစ်ဆေးခင်မှာ Buenos Aires နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်l.
Satan Death Metal တီးဝိုင်း၏ အန္တရာယ်နှင့် သေစေတတ်သော ခေါင်းဆောင်မှ လွတ်မြောက်ရန် စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူ Lucia သည် သူ့အဖွားနှင့်အတူ တောတွင်းရှိ အဝေးထိန်းအခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ သူမပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံခြုံသော်လည်း၊ သူမသည် သူ့မှတ်ဥာဏ်ကြောင့် သရဲခြောက်နေပြီး သူမကို ခြေရာခံရန် မည်သည့်အရာမှ ရပ်တန့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သူသိသည်။
Camilo De Cabo မှလည်း ရေးသားထားပြီး၊ စာရေးဆရာနှင့် ဒါရိုက်တာသည် ယခင်က ဆုရရုပ်ရှင်အတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Kryptonite. အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Florencia Franco သည် ၎င်း၏ 2019 သည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်ကို ထုတ်လုပ်သည့် Monteoliva နှင့်လည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နဂါးကိုသတ်ရန် (မာတာအယ်နဂါး). ငရဲပြည်မှကြိုဆိုပါတယ် (Bienvenidos al Infierno) ရရှိနိုင်အပေါ်ဖြစ်ပါသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း။ ဇူလိုင်လ 12 ရက်နေ့တွင် Screambox တွင်သီးသန့်ဖြစ်သည်။
လာမည့် 'Spirit Halloween: The Movie' အတွက် Trailer ကို Midsummer Scream တွင် ပြသရန် စီစဉ်ထားသည်
Spirit Halloween Store သည် အိမ်နှင့်ဝေးကွာသော ထိတ်လန့်စရာကောင်းသော ခွေးများဖြစ်သည်။ ယခု၊ ၎င်းသည် နောင်လာမည့်တစ်ခု၏ အခြေခံဖြစ်လိမ့်မည်။ Spirit Halloween: ရုပ်ရှင်. ဒီဇာတ်ကားက ဒီဆောင်းဦးရာသီမှာ ထွက်တော့မှာဆိုတော့ နောက်ဇာတ်ကားကို မကြာခင်မှာ မြင်တွေ့ရဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်၊ နောက်တွဲကားတွေအတွက်ပါ။ Spirit Halloween: ရုပ်ရှင် ယခုနှစ် Midsummer Scream တွင် အထူးပွဲပြသမည်ဖြစ်သည်။
အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့် နောက်တွဲကားသည် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးနေ့တွင် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီ အော်မယ်။. တစ်ချိန်တည်းတွင် နမူနာဗီဒီယိုကို အွန်လိုင်းတွင် ပြသနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Midsummer Scream ကို မထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။
အတွက်အနှစ်ချုပ် Spirit Halloween: ရုပ်ရှင် ဤကဲ့သို့သောသွား:
"Rachael Leigh Cook သည် ဆယ်ကျော်သက်သား Jake သည် Halloween ညတွင် ၎င်း၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ စွန့်ပစ်ထားသော ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုတွင် ဆယ်ကျော်သက်သား Jake မှ စခန်းချရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ မကြာသေးမီကမှ လက်ထပ်ထားသော မုဆိုးမ Sue အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ အံ့အားသင့်စရာ၊ အံ့အားသင့်စရာ- ကလေးတွေက “ဒေါသစိတ် [စိတ်] ထဲမှာရှိတဲ့ animatronic ဇာတ်ကောင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါ ကလေးတွေက သူတို့ပေးထားတာထက် ပိုရနိုင်တယ်။”
ရုပ်ရှင်ထဲကမြင်ရတဲ့ ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံတွေက အရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်။ ထွက်လာပြီးနောက် နောက်တွဲကို တူးဖော်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မစောင့်နိုင်တော့ပါ။ ဘယ်လို ဦးတည်ချက်မျိုးနဲ့ သွားနေလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ တကယ်ပဲ မြင်ချင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့အပေါ် updated စောင့်ရှောက်မည် Spirit Halloween: ရုပ်ရှင် ပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကိုရလာသည်နှင့်တပြိုင်နက် ထိုနမူနာကို မျှဝေရန် သေချာပါသည်။
'Supernatural' CW Series Prequel, 'The Winchesters' သည် ယခုအောက်တိုဘာလတွင် ရောက်ရှိလာမည်
နောက်ဆုံးတော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ အရှည်ကြာဆုံး တီဗီစီးရီးများထဲမှ တစ်ခုသည် နောက်ဆုံးတွင် ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ CW သည် Sam နှင့် Dean in ၏ စွန့်စားခန်းများနှင့် စွန့်စားခန်းများအကြောင်း စာအုပ်ကို ပိတ်လိုက်သည်။ သဘာဝလွန်. ဒီတစ်ခါတော့ Winchesters များ Sam နှင့် Dean ၏ မိဘများဖြစ်သည့် Mary Campbell နှင့် John Winchester တို့ကို အာရုံစိုက်ပါမည်။ အားလုံးကို ဒင်းရဲ့အမြင်ကနေ ပြောပြပြီး သူ့ဆီကနေတောင် ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
လာမည့် CW prequel အတွက် အကျဉ်းချုပ်၊ Winchesters များ ဤကဲ့သို့သောသွား:
John က Mary နဲ့တွေ့ပြီး ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ အရာခပ်သိမ်းကို တန်းစီနေပုံအကြောင်း မရေမတွက်နိုင်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ရေးထားပါတယ်။ ဒီစီးရီးကို Dean Winchester ရှုထောင့်ကနေ ပြောပြပါမယ်။
Meg Donnelly သည် Mary Campbell အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး Drake Rodger သည် John Winchester အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါက နောက်တစ်ကြိမ် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံပြင်တွေ အများကြီးကို ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကွက်လပ်တွေ အများကြီး ဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်။ သဘာဝလွန် ထိရုံသာ။
Jensen Ackles သည် အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။ Winchesters များ ၎င်းကို CBS ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် Warner Bros ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ ထွက်ပေါ်လာသည်။ စူးစမ်းရန် ဇာတ်လမ်းများစွာရှိပြီး Mary နှင့် John ဆုံတွေ့ပြီး John ကို အသစ်တစ်ဖန် မုဆိုးဖြစ်ခြင်းကမ္ဘာနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရန် ပရိသတ်များအတွက် အလွန်ကောင်းပါသည်။
Winchesters များ အောက်တိုဘာလ 11 ရက်နေ့မှစတင်၍ CW သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
8 ခုနှစ်အတွင်း ထွက်ရှိလာမည့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင် ၈ ကား
Guns N' Roses ဂစ်တာသမား Slash သည် 'The Breach' ပြည့်နေသော Gnarly FX ကိုထုတ်လုပ်သည်
ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း2 weeks ago
Ed Gein: နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောစိတ်ပညာသည်ထိတ်လန့်ဖွယ်အကောင်းဆုံးသောလူကြမ်းအချို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပုံ
'Black Phone' သည် Box Office တွင် ဒေါ်လာ 77 သန်းအထိ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်။
Abandoned Trailer သည် Emma Roberts နှင့်အတူ ကြောက်စရာကောင်းသော ရူးသွပ်မှုထဲသို့ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
THE CONJURING: မာရ်နတ်ကငါ့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ် - တရားဝင် Trailer
Netflix မှာကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၁၀ ခု
ထိပ်တန်း 10 မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Prank ထိတ်လန့်ကြောက်စရာ
Parisa Fakhri သည် 'အရိပ်များထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြုသည့်အရာ' ဇာတ်လမ်းတွဲ4တွင် ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။
Jeffrey Reddick က 'နောက်ဆုံးပန်းတိုင်' တွင် မတူညီသော "ဖော်မြူလာ" ရှိသည်ဟု ပြောသည်
James Gunn နှင့် Suda51 ၏ 'Lollipop Chainsaw' သည် Gnarly Remake ကိုလက်ခံနေသည်
@ 2022 - အားလုံးလက်ဝယ်ထားရှိသည်။